· Asiana vinaingitra ny rindrina
Atao anaty tavoahangy fanaovana tsifitsifitra ny vinaingitra fotsy ary atsifitra amin’ny faritra misy bobongolo amin’ny rindrina.
Avela hipetraka mandritra ny adin’ny iray ary fafana amin’ny mosoara taratasy.
Azo atao ihany koa ny maka spaonjy ka vontosana vinaingitra fotsy ary hikosehina ny rindrina.
Amin’ireo fomba roa ireo anefa dia kobanina amin’ny rano madio hatrany ny rindrina.
· Diovina amin’ny “eau de javel”
Rehefa avy mampiditra fiarovana amin’ny tanana dia fenoina rano ny koveta iray ary ampiana “eau de javel” kely.
Vontosana amin’io fangaro io ny « éponge » na ny borosy ary hikosehina ny faritra misy bobongolo rehetra.
· Fafazana « eau oxygéné »
Mba hanalana ny tasy sy ny hiadiana amin’ny mikraoba dia afangaro anaty koveta ny rano matimaty 2/3 sy ny “eau oxygéné” 1/3.
Fafazana amin’ny faritra bobongolo ary avela hipetraka mandritra ny 10mn.
Rehefa afaka izay dia kosehina ary kobanina.